Ike Umuaka | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nchịkọta: Ahụike ụmụaka
Kedu ka ị na-achọ ka akpụkpọ ụkwụ ụmụaka nke twiki? ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ezie, nke ị ga-akwado?
Kedu ka ị na-achọ ka akpụkpọ ụkwụ ụmụaka nke twiki? ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ezie, nke ị ga-akwado? ọ bụghị okwu nke siri ike, mana maka otu ị họọrọ akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị maka nrụrụ ụkwụ gị. twiki- ...
Ọ ga-ekwe omume ịgbanwe olu na ụlọ na kedu?
Ọ ga-ekwe omume ịgbanwe olu na ụlọ na kedu? Na kọmputa? Chọta vidiyo na YouTube. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, mgbe ahụ .. Gaa dọkịta (ya bụ, onye na-arụ ọrụ ahụ, i chefuola ...
nwa ahụ nwere cheeks
nwatakịrị nwere cheeks. Mgbu na ntì nwere ike ime na ọrịa dị iche iche. Ihe na-akpata ngbu na nhụjuanya Ogbugbu na ntì nwere ike ime ka ọrịa pulpitis, caries, periodontitis na ọrịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ...
Diaskintest dị ka Mantus dị mma, ezigbo mma ... pịgharịa site na oghere oghere wee hụ Redness kwesịrị ịbụ na nke a bụ ihe nkịtị. Ruo 20 mm norm (uhie uhie na dayameta). ...
Otipax dara - onye ji? kedu mmetụta ọ bụ?
Otipax dara - onye ji? kedu mmetụta ọ bụ? n'oge ezumike, ntị m merụrụ ahụ, ana m agbatị mmiri 5 nke 3 raaz kwa ụbọchị, ihe niile gara nke ọma! Anọ m na-eche ihe mere ị ga-eji laghachi ...
Enwere m ike ịsa ahụ nwa m ihe nfụkasị?
Enwere m ike ịsa ahụ nwa m ihe nfụkasị? na usoro !!! N'ezie i nwere ike. Naanị okpomọkụ nke mmiri ekwesịghị ịdị ọkụ, n'ihi na nwa ahụ ga-erekwa akpụkpọ ahụ ...
omume maka bridle n'okpuru ire
ihe omume maka bridles n'okpuru ire Mmezi na ịkwesịrị ibuli ire, ekele ha gbatịa bridle! Mana na 1.5, nwatakịrị a na-esiri ike ịkọwa otú e si eme ya, ya mere ị ghaghị inye aka!
Esi ewepu nwa obere n'ime nwa?
Esi ewepu nwa obere n'ime nwa? ị nwere ike ịchọta ya na onye na-achọ ọgwụ, ma ị nwere ike ịzụta celandine ma ọ bụ ihe ọzọ ma gbalịa onwe gị. Ulo Aghọtaghị ihe kpatara ihe kpatara ha. Na-atụ aro inye onyinye ...
Kedu ụdị ekteritsid dị otú ahụ? Tụlee n'ime imi +
Kedu ụdị ekteritsid dị otú a na dobe na imi + ọkụ, ejighị ya kpọrọ salted na obere mmiri, itucha, ntụgharị, a di na nwunye tụlee ke nostril. ma ọ bụ gbalịa otú ahụ: mbadamba 5 furatsilin gwakọtara na iko iko mmiri (ma ọ bụghị na ha agaghị agbasa) ...
Kedu etu esi esi ewepu Mercury site na aru?
Kedu etu esi esi ewepu Mercury site na aru? Unithiol Taurine Methionine ma na n'ozuzu ya kwesịrị ịgwọ ya site na dọkịta. Ee, na nchoputa ahọpụta kwa. Iwepu mercury site na aru mmadu siri ike. Na ...
ọgwụgwọ maka adenoids
Ngwọta maka adenoids 1. Celandine na-ata ahịhịa, mgbe ọ na-agbaji, na-agbagharị n'ime anụ na-atụgharị anụ, na-amanye ihe ọṅụṅụ ahụ. Na 1 mmiri mmiri 20 tụfuru. 2. Ngwọta maka ọgwụgwọ nke adenoids bụ ngwakọta nke mmanụ aṅụ na biiti. ...
38.5 okpomọkụ na nwa 10 nwa na-enweghị mgbaàmà
Ọdịdị okpomọkụ nke 38.5 na nwa 10 ọnwa na-enweghị mgbaàmà nke tonsil na-amụba na ọnwa 10?! si ebe? Ekwetaghị m gị na ị kpọrọ dọkịta n'ụlọ ... kpọọ ụgbọ ala, n'ihi na 3 si ...
3 Nwa nke Afọ - Nye Ntụziaka Nri Mgbochi. ụkwara akọrọ na-abịa mgbe ụfọdụ. mgbe ụfọdụ ọ na-ada ụra. enyemaka
3 Nwa nke Afọ - Nye Ntụziaka Nri Mgbochi. ụkwara akọrọ na-abịa mgbe ụfọdụ. mgbe ụfọdụ ọ na-ada ụra. nye aka Gbalịa, ma ọ bụrụ na MD adịghị enwe nfụkasị, 1 iko iko karọt na 2-3 Art. ...
Kedu ụzọ kachasị mma isi na-emeso rhinitis 9 maka nwa dị otu ọnwa?
Kedu ọgwụgwọ kachasị mma maka imi 9 imi na-agba ọsọ maka nwa dị ọnwa. Imi na-agba n’ime nwatakịrị dị otú ahụ bụ ezigbo ntaramahụhụ maka ya na ndị mụrụ ya! Ọ chọrọ ndidi na njide onwe onye! Ihe ndi ozo: sitere na vasoconstrictors - ...
Nye ndụmọdụ ka esi emeso imi na nwa 3 afọ?
Nye ndụmọdụ ka a ga-esi na-emeso imi na-agba ọsọ n'ime nwatakịrị nke afọ 3? Agwara m nwa m nwoke (ọnwa 7,5 ọnwa), ejiri Vibrocil gwọọ imi na-agba ọsọ ma jiri Dr.Ma ... mee ihe ọ bụla. tupu ...
Ndị dọkịta kwuru na Lyamblia, gịnị ka ọ bụ nakwa na ọ dị ize ndụ ịgwọ?
Ndị dọkịta kwuru na Lyamblia, gịnị ka ọ bụ nakwa na ọ dị ize ndụ ịgwọ? Ihe n '769; mlibiya, ma ọ bụ zhya # 769; pdii (lat. Giardia) parasitic flagellate na-esi n'usoro ihe n'usoro n'usoro (Diplomonadida), na-edozi n'ime obere eriri afọ nke mmadu na ...
Nwa 2,2 n'afọ. Afọ m na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, mgbe ahụ, ọ malitere ịkwa ákwá, na-eti mkpu, na-ebe ákwá
Nwa 2,2 n'afọ. Ọ na-afụ ụfụ na spasms, ihe niile dị njọ, mgbe ahụ, ọ malitere iti mkpu, na-ehichapụ ya, na-ebe ákwá otu nwa agbọghọ, ma eleghị anya ị dọpụ uche gị, nwatakịrị ahụ elola ihe na ya ma ọ bụ ṅụọ ihe na-ezighị ezi ...
Achọpụtara nwatakịrị m na ọ ga-eme ka ụbụrụ na-adịghị mma. Kedu ihe a bụ?
Achọpụtara nwa m ọrịa ọrịa ọbara Sinus. Gịnị bụ ihe a Omume obi nwere ike imeghari obi .... Lee ihe mgbochi AB…. Ejiri ogo 3-4 ... sinus node dysfunction site na ụdị oge bradycardia na tachycardia, na-apụta ...
Ejiri ọgwụ polyoxidonium jikọtara ya na ọgwụ ndị ọzọ dịka onye ọgwụ immunologist kwuru. Nsonaazụ ahụ dị mma. Kwe ka o nyere gị aka. Nwa anyị nwoke nyeere aka n'ezie, mana anyị tinyere ya na…
N'ime nwa 2, okpomọkụ nke 38,5, akpịrị ọbara ọbara na ọtụtụ pustules na akpịrị. Olee otú m ga-esi gwọọ ya ngwa ngwa.
N'ime nwa 2, okpomọkụ nke 38,5, akpịrị ọbara ọbara na ọtụtụ pustules na akpịrị. Olee otú m ga-esi gwọọ ya ngwa ngwa. Gaa na dọkịta kama, ị gaghị anwale ụzọ niile nke ọgwụgwọ ndị dị ebe a maka gị ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,662.